Mba manaraha ihany ianareo vaovao e ! Fa manao ahoana mihitsy ianao io izao e ? Rehefa tsy afaka mividy an’ilay mbala anie isika dia afaka manome zavatra hafa na manohana amin’ny fomba hafa e ! Tsy izahay indray no hamoronana resaka mandany jiro eo dia hampikorontana ny fifantohan’izay efa tokony hifantoka. Dia tsy haiko indray izao ry Jean izay hotsikeranareo manaraka fa mba mahaiza mankasitraka na dia indraindray ihany aza !